Tontolon’ny fampisehoana : efa lasa filana ny famandrihana tapakila mialoha | NewsMada
Tontolon’ny fampisehoana : efa lasa filana ny famandrihana tapakila mialoha
Be mpankafy sa tsia ny mpanakanto na tarika iray? Azo andrefesana izany ny fahalanian’ny tapakilana fampisehoana mialoha. Efa tafiditra ho fahazaran’ny mpankafy ny famandrihan-toerana amin’izao…
Miala tsikelikely ny fahazaran-dratsy! Mahafaly ireo mpikarakara fampisehoana sy ireo mpanakanto ny finiavan’ireo mpankafy hamandrika mialoha ny tapakila hidirany amina seho iray. Voaporofo tao anatin’ny taom-pampisehoana vitsivitsy, fa efa manomboka mipetraka ho fahazaran’ireo mpankafy sy mpijery fampisehoana izay fividianana tapakila mialoha izay.
Samy mahazo tombony amin’izany ny rehetra ary tsy misy mitaintaina. Miandry ny fotoana sisa ny mpankafy; ny mpanakanto, afaka manomana tsara satria andrasan’ny maro ary ny mpikarakara kosa afaka manomana seho raitra.
Teo aloha mantsy, miandry ny andron’ny fampisehoana foana, matetika, ireo mpijery vao mirodorodo mitady ny tapakila. Miteraka olana ho an’ny andaniny sy ny ankilany hatrany anefa izany. Ho an’ireo mpijery, lasa filaharambe ny fakana tapakila sy ny fidirana eo am-bavahady. Ho an’ny mpikarakara, sarotra ny fandaminana ny fampidirana ny mpijery, ka matetika miantraika any amin’ny fanombohan’ny fampisehoana izany.
Tsara fanombohana ny taom-pampisehoana 2017
Manodidina ny fetin’ny mpifankatia hatrany ny fanombohan’ny taom-pampisehoana eto amintsika, indrindra eto an-dRenivohitra. Tsara fanombohana izany, raha tarafina tamin’ny seho izay nataon’i Njakatiana ny alahady teo, tetsy amin’ny lapan’ny Fanatanjahantena Mahamasina. Handimby azy ao amin’io toerana io ihany ny tarika Mahaleo, izay efa nanambara tamin’ny fomba ofisialy ihany koa fa efa lany tanteraka avokoa ny tapakila rehetra. Toraka izay ihany koa ny fampisehoana izay hotontosain’ny tarika AmbondronA ao amin’ity toerana ity ihany. Ny azy ireo aza, efa tamin’ny faran’ny herinandro teo, izany hoe tapa-bolana mialoha, dia efa najifa avokoa ny tapakila rehetra.
Manomana seho indroa miantoana ao amin’ny CCEsca koa i Francis Turbo, ny zoma 17 febroary sy ny alahady 19 febroary, izay efa azo antoka ihany koa fa tsy hisy ny tapakila amidy ny andron’ny fampisehoana intsony koa.
Ankoatra izay, efa maro ireo miandrandra ny fampisehoana goavana manaraka, toy ny “Mifampitantana” iarahana amin’i Bodo sy i Poopy, ny 19 marsa ao amin’ny lapan’ny Fanatanjahantena ihany.
Karazana fitsapana laza ihany koa ny fivarotana tapakila mialoha, ho an’ny mpanakanto sy ny mpikarakara. Misy rindran’asa mifampiankina ao ambadik’izay, ka miankina amin’ny fahombiazan’ny tsirairay ny fahombiazana ankapobeny. Mamokatra ho an’ny mpankafy ny mpanakanto. Mandray an-tanana ny vokatra ho azon’ny mpankafy jifaina ny mpikarakara ary mampahafantatra ny haino aman-jery.
Mila fotoana fanomanana izany rehetra izany fa tsy an’ny maika. Volana maromaro ary misy aman-taony mihitsy ny fanomanana fampisehoana goavana iray.
“Ny mpankafy izay tia mijery fampisehoana no tena mpanohana voalohany. Tsapanay koa anefa fa efa manokatra ny varavarany ireo orinasa mpanohana izao, tsy toy ny tamin’ny dimy taona lasa. Mampiakatra ny lentan’ny fampisehoana ireny fanohanana ireny”, hoy ny nambaran’ny mpikarakara iray.